Report | Burma Muslim
လူလိမ်သိန်းစိန်ရဲ့ လန်ဒန်မြို့ မိန့်ခွန်း
By burmamuslim on July 16, 2013 | Leaveacomment
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းပြီး တရားမျှတမှုနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့
အလုံးစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး
(Chatham House ၌ ကျင်းပသည့် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နောက်ကွယ်မှ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကျိုးရလဒ်များ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်
[ မိန့်ခွန်းကို သမ္မတရုံး အွန်လိုင်းစာမျက်နှာကနေ ယူပါတယ်။ ]
ကျွန်တော်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များရဲ့ တတိယ မျက်နှာစာလည်း ဖြစ်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍလို့လည်း ဆိုရမယ့် ကိစ္စကတော့ ပြည်တွင်းမှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းပြီး တရားမျှတမှုနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ အလုံးစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ မြန်မာနှင့် ဗြိတိန် တပ်မတော်တို့အကြား ရင်းနှီးချစ်ကြည်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လိုပါတယ်။ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ပိုမိုခိုင်မာစေရုံသာမက ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေ ကိုလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အရေးကြီး လုပ်ငန်းစဉ် တွေထဲက အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာပိုင်း စွမ်းရည်တွေကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် တပ်မတော် အပါအဝင် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အင်အားစုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်ဆောင် သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်ဘက်- အရပ်ဘက် ဆက်ဆံရေး မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့နဲ့ ရရှိလာတဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ဆက်လက် ခိုင်မာနေစေဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီတွေ အကြံပြုချက်တွေကို ကြိုဆိုလျက် ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ဖို့ အတွက် အဓိကကျတဲ့ အချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူစွာ ပြောကြားလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ တာဝန်ယူထားတဲ့ နှစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ အဓိက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အားလုံးနီးပါးနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ KIO အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လည်း ပဏာမ ငြိမ်ချမ်းရေး သဘောတူညီချက် အချို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ အကုန်ပိုင်းမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့်ရက်များအတွင်းမှာ တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်တစ်ဆင့်ကို ကျော်ဖြတ် နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ သေနတ်သံတွေ ချုပ်ငြိ်မ်းမယ့်နေ့ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်မှုဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ သမိုင်းအချိုးအကွေ့ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အားလုံးက ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူ ပျော်ရွှင်ကြရမယ့် ကိစ္စတခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ တရားမျှတပြီး ရေရှည် တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ ကနဦး ခြေလှမ်းမျှသာဖြစ်ပြီး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကနေတစ်ဆင့် သဘောတူညီချက်တွေ ရရှိအောင် ခက်ခဲတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို မဖြစ်မနေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်အောင်မြင်မှုဟာ ပြည်သူလူထုအားလုံးကို ကိုယ်စား ပြုနိုင်တဲ့ မြန်မာ့အမျိုးသားရေး လက္ခဏာသစ် ( National Identity) တရပ် တည်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ် ပတ်သက်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ အားလုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာ စတဲ့ လူမျိုးဘာသာမရွေး မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးသဘောတူညီ လက်ခံနိုင်တဲ့ National Identity သစ်တရပ်ကို တည်ဆောက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စုံရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားပေါင်း အမြောက်အများကို ပြောဆိုတဲ့ လူမျိုးစုများနဲ့ ကမ္ဘာမှာ ကြီးမြတ်တဲ့ ဘာသာတရားကြီးများကို အသီးသီး ကိုးကွယ်ယုံကြည် သူများစွာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလော ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံ တကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုတွေ ပေါ်ပေါက်အောင် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်သူ မည်သူကိုမဆို လုံးဝ သည်းခံခွင့်လွှတ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းများ သိထားကြတဲ့အတိုင်း အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွေမှာ ပေါ်ပေါက် လာတဲ့ နိုင်ငံရေး ပွင့်လင်း လွတ်လပ်မှုတွေကို ခုတုံးလုပ်၊ အမြတ်ထုတ်ပြီး မလိုလား အပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ကြသူများ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ နုနယ်သေးတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အနေအထား တစ်ရပ်ကနေ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အာဏာရှင်စနစ်ဆီကို ပြန်ဦးတည်ဖို့ ခုတုံးလုပ် အသုံးချခံရခြင်းမျိုး မဖြစ်စေဖို့အတွက် ဘာသာပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတွေ ဖြစ်မြောက်အောင်၊ မတူညီတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အသိုက်အဝန်းတွေကြားမှာ နားလည်ယုံကြည်မှုတွေ တိုးတက်လာအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီလို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ဒီတာဝန်ရဲ့ နက်နဲ သိမ်မွေ့မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု နားလည်ပေးဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုတွေ ထားရှိပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
လတ်တလော သတင်းခေါင်းစဉ်တွေ သက်သက်ထက် ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ နားလည်မှုတွေ ထားရှိပေးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေရှိခဲ့ပေမယ့် မတူညီတဲ့ ရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးဟာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျောင်းနေဖက်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေ အိမ်နီးချင်းတွေ အဖြစ် ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာနဲ့ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူယှဉ်တွဲ တည်ရှိလာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ ဘုရားပုထိုးစေတီများ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၊ ဂျူးဘာသာဝင်များရဲ့ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းများ၊ တရုတ်ဘုံကျောင်းများနဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များရဲ့ ဗလီများဟာ ကွဲပြားမှုများ အပေါ်မှာ အစဉ်အလာအရ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြသနေတဲ့ သက်သေ သာဓကများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ် အလာတွေ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဝိသေသ တွေကို အားနည်းချက် မဖြစ်စေဘဲ အင်အားတွေဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့
By burmamuslim on June 8, 2013 | Leaveacomment
Posted in: အထူး, Report
မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့၏သမိုင်းများအားမှေးမှိန် ပျောက် ကွယ် ၍ သက်သေ မ ကျန် ရန် လုပ်
By burmamuslim on June 5, 2013 | Leaveacomment
မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့၏ သမိုင်းများအား မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်၍ သက်သေအဖြစ် မကျန်ရှိရအောင် ကဘာရ်စတာန် သင်္ချိုင်းများအား အတင်းအဓမ္မ ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီး အချို့နေ ရာများတွင် ဘုရားများပင် လုယူ၍ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအား ရန်သူများဟု သတ်မှတ်၍ ဗလီနှင့် ကျောင်းများသို့ ရှောင်တခင် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းများလည်း ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်းများကလည်း မွတ်စလင်မ်ဆိုပါက ရိုင်းစိုင်းမောက်မာစွာ ဆက်ဆံခံနေရဆဲပင် ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်များ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး မှန်သမျှကို လုံခြုံမှုမရှိစေဘဲ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ခံနေရဆဲပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြားတွင် မွတ်စလင်မ်တို့သည် အဘက်ဘက်မှ တိုက်ခိုက်ခံနေခဲ့ရပြီး၊ ကြီးမားသည့် ဆုံးရှုံးမှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသော်လည်း အကြမ်းဖက်သူများ အပေါ် အရေးယူမှုမှာ ထင်ရှားမှု မရှိခဲ့သော်လည်း၊ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် ပြန်လည် ခုခံကြသည့် မွတ်စလင်မ်များကိုတော့ ဥပဒေမျိုးစုံ၊ ပုဒ်မမျိုးစုံတပ်၍ ပြင်းထန် ရက် စက်လှသည့် အမိန့်ပြစ်ဒဏ်များကို ချမှတ်၍ အရေးယူခြင်း ခံနေရပေသည်။
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းမခံရသည့် တက်ကြွသောမွတ်စလင်မ်များကိုလည်း အစိုးရအနေဖြင့် မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ဖို့ မျှော့ကွင်း ဥပဒေများကို လက်ကိုင်ထားပြီး၊ မရှင်း လင်းသော စကားလုံး၊ စကားရပ်များအား အသုံးချ၍ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ပြန့်ကားရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနွယ်ဖွား မွတ်စလင်မ်များနှင့် ပြည်တွင်းမွတ်စလင်မ်များအပေါ် ဆက် သွယ်မှုများ ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ခံနေရပေသည်။
မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များသည့် တင်ပြခဲ့သလို တိုင်းပြည်အတွင်း သစ္စာရှိစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းကာလ အချိန်တိုင်း မှာ မွတ်စလင်မ်များ၏ ၀ိဉာဉ်ကိုချနင်း၍ စတေးပေးခဲ့ရသော်ငြားလည်း ယနေ့အချိန်အထိ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ၏ ဘ၀ကား ဆိုးရွားဆဲ ကြမ်းတမ်းဆဲပင် ဖြစ်ပေသည်။
အထက်ပါ ကြမ်းတမ်းလှသည့် သမိုင်းခရီးကြမ်းများကို ကမ္ဘာ့နေရာဒေသအသီးသီးက မသိမြင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယမန်နှစ်ရဲ့ ယနေ့ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့က ရှဟီးဒ်လမ်းစဉ်ဖြင့် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ထံ ပြန်သွားခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀) ဦးက မိမိတို့အသက်ကို စတေးရင်း ကမ္ဘာကြီးကို မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအရေး သတင်းစကားပေးခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
ထို သူမွန်သူမြတ်များရဲ့ အသက်ဝိဉာဉ်စတေးမှုကြောင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ နိုးကြားလာစေသည်။ မိမိတို့ အီမာန်ရှင်၏ တန်ဖိုးကို သိလာစေသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နဲ့ ရစူတမန်တော်မြတ် အပေါ် ချစ်ခင်ယုံကြည်မှု ပိုကဲလာစေသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ရခြင်းကို ဂုဏ်ယူလာကြပေသည်။ မွတ်စလင်မ်များအချင်းချင်း ချစ်ခင် စည်းလုံးလာ ခဲ့ကြပေသည်။ အစ္စလာမ်ဟူသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း ပိုမိုမြတ်နိုးလာခဲ့ကြပေသည်။ ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်များ၏ ဂရုဏာဒိုအာတွေကိုလည်း ရရှိခဲ့ကြပေသည်။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဟူ၍ ကမ္ဘာတွင် ရာဇ၀င် တွင်ရစ်ခဲ့ရပေသည်။
ဤသည် ထိုသူမွန်သူမြတ်တို့နှင့် အခြားအခြားသော မြန်မာမွတ်စလင်မ် သာသနာ့အာဇာနည်ကြီးတို့၏ အသက်ပေး စတေးမှုအတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ ကြီးမားသည့် ဆုတော် လာဘ်တော်ကြီးပင် ဖြစ်တာမို့ အာဇာနည်သူမွန်သူမြတ်တို့၏ မိသားစုဝင်များအနေဖြင့်လည်း ဂုဏ်ယူရပေသည်။
ထို့အတူပင် ကမ္ဘာအ၀ှမ်းမှ မွတ်စလင်မ်ညီနောင်များ၏ ကောင်းမှုတိုင်းမှာလည်း မြန်မာပြည်မှ ရှဟီဒီအပေါင်းတို့အပေါ် အီစာလေ့စ၀ဗ် ပို့သဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းလိုပါ သည်။ နှစ်စဉ်နှစ် တိုင်းရဲ့ ယခုလို ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့ရောက်တိုင်းမှာလည်း မြန်မာမွတ်စလင်မ် ရှဟီဒီများအတွက် ရည်စူးသည့် ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုလည်း တက်စွမ်းသမျှ ပြုပေးကြဖို့ လည်း မေတ္တာ ရပ်ခံလိုပါသည်။
ယနေ့အချိန်အခါမှာ သာသနာ့အတွက် အသက်ပေး စတေးခဲ့သည့် ရှဟီဒီတို့၏ မိသားစုများရဲ့ရင်မှာ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးနေကြမည်မှာ မုချဧကန်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ိုင်းတော်သားများအနေဖြင့်လည်း ရှဟီဒီမိသားစုတို့ရဲ့ ပူဆွေးမှုအတိုင်း ထပ်တူ ထပ်မျှ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေကြရပြီး၊ ယနေ့အား ထာဝစဉ် မမေ့ပျောက်နိုင် သည့် နေ့ရက် တစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
By burmamuslim on June 1, 2013 | Leaveacomment
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် (၈) မြို့နယ်မှ ဘင်္ဂလီမိသားစု တစ်စုလျှင် သားသမီး (၂) ဦးယူရန် ဒေသန္တရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းကို ထောက်ခံကြောင်း သဘောထား ကျေညာချက် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရသေ့တောင်မြို့နယ်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌလည်းဖြစ်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွှေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လွှတ်တော် အမတ်လည်း ဖြစ်သော ဦးမောင်ကြွင်းအောင်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ သူက ယခုလို ပြောကြားသည်။
ဦးမောင်ကြွင်းအောင်မှ မိမိမှာ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်နေကြောင်း၊ ယခုလို အရေးကြီးသော သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကော်မီတီဝင် လူကြီးများ မသိဘဲ ထုတ်ပြန်ခွင့် မရှိကြောင်း ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ မသိဘဲ ဒီထုတ်ပြန်ချက် ထွက်လာတဲ့ အပေါ်မှာ ပြောဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ပေါ်လစီပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွက် ဗဟိုကသာ ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး လုပ်သလား ဆိုတာလည်း မသိရဘူး။ စစ်တွေက လုပ်သလားလည်း မသိရဘူး။ ကျွန်တော်က အခု ရန်ကုန်ကို ရောက်နေတဲ့ အတွက် မသိရတဲ့ ကိစ္စပေါ်မှာ ပြောဖို့ ခက်ခဲပါတယ်” ဟု ဦးမောင်ကြွင်းအောင်က ဆိုသည်။
မြေပုံမြို့တွင် နေထိုင်သူ မြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ဒေါ်မပုချေအား ဆက်သွယ် မေးကြည့်ရာ ယခု ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ သိရှိခြင်း မရှိကြောင်း သူမက ပြောကြားသည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မီတီဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးမင်းအောင်အား မေးကြည့်ရာ ယခု ကျေညာချက်အား စစ်တွေမြို့နယ်မှ လူတစ်စုက ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
နိရဉ္စရာ News- (1-6-2013)
အုန်းသီးကနေ ရရှိတဲ့ အုန်းဆီဟာလည်း အလွန်အကျိုး များတဲ့ ဆေးကုသမှု ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအဖြစ် သုံးစွဲ နိုင်ပါသေးတယ်.. အုန်းဆီဟာ အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း ဆံပင်သန်စွမ်း နက်မှောင်ဖို့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝ အားဖြည့်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်.. အုန်းဆီဖြင့် ဦးခေါင်းကို မှန်မှန် နှိပ်နယ်ပေးပါက ဦးရေပြားတွင် ဖြစ်တတ်သော ဘောက်နှင့် ဦးရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်း တို့ကို ကာကွယ် နိုင်ပါတယ်။ ပျက်စီးနေသော ဆံပင်များကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းဖို့ အတွက်လည်း အုန်းဆီမှာ အလွန်ကောင်းမွန် အဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အုန်းဆီကို ဆံပင်ပြုပြင်ရေး ပစ္စည်း၊ ဗောက်များ ကာကွယ်သော ပစ္စည်းအဖြစ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်.. နောက်ထပ် အသုံးဝင်သော အချက်မှာ အုန်းဆီသည် သွားပိုးစားခြင်း၊ သွားရောဂါများဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်.. အုန်းဆီအနည်းငယ်ကို သွားဖုံးနှင့် သွားတို့တွင် အမြဲတမ်း ပွတ်တိုက် ပေးပါက သွားများကို ပိုမို ခိုင်မာ စေနိုင်ပါတယ်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်.…
အုန်းဆီကို အရေပြားပေါ် လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါက အသားပတ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်.. အရေပြား တွန့်ခြင်းကိုလည်း နှောင့်နှေး စေတယ် လို့ သိရပါတယ်. အုန်းဆီပါဝင်တဲ့ အရေပြား စောင့်ရှောက် ပစ္စည်းများ ဖြစ်တဲ့ ဆပ်ပြာ၊ အသားလှလိမ်းဆေး၊ လူးဆေးခရမ်စသဖြင့် အများအပြားကို ထုတ်လုပ် ကြပါတယ်.. ထိခိုက်ရှနာများ အတွက်လည်း အုန်းဆီဟာ ဆေးဝါးတစ်လက် အဖြစ် အထောက်အကူ ပြုနိုင် ပါသေးတယ်.. ဒဏ်ရာပေါ်မှာ အုန်းဆီကို လိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် ပြင်ပမှ ဖုန်များ ၊ ဘက်တီးရီးယားများနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်များ မ၀င်ရောက်နိုင်အောင် အလွှာပါးလေး အဖြစ် ဖုံးအုပ် ထားစေပါတယ်.. အုန်းဆီဟာ ဒဏ်ရာပေါ်မှ ပျက်စီးသွားသော တစ်ရှူးများကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ကောင်းမွန် စေနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း သိရပါတယ်.. အုန်းဆီဟာ ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ အရေပြားပေါ် ဖြစ်တတ်သော မှိုများ၊ စသည်တို့ကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်..
ကျန်းမာရေးအတွက် အုန်းရည်များများသောက်ပြီး အုန်းဆီ များများလိမ်းလို့ အုန်းနို့ကိုတော့ သင့်တင့်ရုံသာ စားကြပါစို့နော်….
By burmamuslim on May 11, 2013 | Leaveacomment
လူမျိုးရေးအရေးအခင်းစဖြစ်ကတည်းကသမ္မတကြီး စကားလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းသည်ဟု ဒေါက်တာ ဇာနည် ဝေဖန် …
By burmamuslim on April 21, 2013 | Leaveacomment
လူမျိုးရေးအရေးအခင်း စဖြစ်ကတည်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စကားတွေက လေး၊ငါးခါလောက် အမျိုးမျိုး စကားလမ်းကြောင်း တွေပြောင်းသွားတယ် »
“လူမျိုးရေးအရေးအခင်း စဖြစ်ကတည်းကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စကားတွေက လေး၊ငါးခါလောက် အမျိုးမျိုး စကားလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းသွားတယ်။ သမ္မတလို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတောင် မျိုးစုံပေါ့ဗျာ။ ဒီကွေ့ မှာဒီတက်နဲ့ လှော် ပုံစံမျိုးနဲ့ ။ အဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ နေပြည်…
တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ အဲဒီအင်အားစု လေးစုနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကျွန်တော်တို့ ဆီကိုလာပြီးတော့ သူတို့ အကြံနဲ့ သူတို့ ၊ သူတို့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ သူတို့ ပြန်ဝင်လာကြတယ်။ ဒီပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေမှာနိုင်ငံရေးအခံ၊ အတွေးအမြင်၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ခံမရှိဘူး၊တိုးတက်မလာဘူးဆို ရင်တော့ ရှေ့ လျှောက်မှာကောင်းတဲ့ အပိုင်းရှိသလိုပိုပြီးတော့ လည်း ဆိုးလာနိုင်တယ်လို့ လည်း ကျွန်တော်မြင်တယ်။
နိုင်ငံရေးကစားတဲ့၊ စီးပွားရေးကစားတဲ့ အကျိုးအမြတ်ထုတ်တဲ့သူတွေအရမ်းများလာတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီတစ်ခါတိုင်းပြည်မှာ ခေါင်းဆောင်မှုအသုံးမကျရင်တော့ ဒုတိယအခွင့်အလမ်း ပြန်ရမှာမ ဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာကတစ်စစီကို စုတ်ပြတ်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးမြင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီကိုတရုတ်ဝင်လာတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမေရိကန် ပြန်ဝင်လာတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂလိပ်ကပြန်ဝင်လာတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျပန်ကလာတာဘဲဖြစ်ဖြစ် အကူအညီပေးတဲ့အခါလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးဖို့ ဘဲဖြစ်ဖြစ်ငွေသန်းကို ရာနဲ့ ချီပြီးပေး မယ်။ ဒါတွေက တကယ်တမ်းပြောရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ပြည်သူအများစု ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့အခါဆိုတော့၊ ပြာပုံပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဆိုတော့ ဒေါ်လာ တစ် သန်းဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်သောင်းဘဲဖြစ်ဖြစ်၊တစ်သိန်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာ့ ဘဏ်တို့အင်္ဂလန်တို့ ကပေးတဲ့အခါမှာ အားလုံးက၀မ်းလည်း သာတယ်၊ ကျေးဇူးလည်း တင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပိုက် ဆံတွေ ၀င်လာတာက တကယ်တမ်းပြောရရင် နိုင်ငံခြားအကူအညီဆိုတာ မရှိဘူးခင်ဗျ။အလကား ထမင်းကျွေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ က ကျွန်တော်တို့ ကိုချစ် လို့ ဒီလို ပိုက်ဆံ ပစ်ပေး တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေက ထောင်မြင်ရာစွန့် ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။
ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီး အကျိုးရှိမယ့်နေရာမျိုးမှာ ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာလောက်ပေးလိုက်ရတာ သူတို့ အတွက် ပြဿနာမရှိဘူး။ အဲဒါကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ က ငွေထုတ်ကြီးတွေ ပိုက်ပြီး ၀င်လာတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေ၊ ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေလို့ မှတ်ယူပြီး သပြေပန်းနဲ့ ကြိုနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် ပြဿနာရှိနိုင်တယ်။
အရင်က စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးတော့ တရုတ်နဲ့ ဘဲ လက်မှတ်ထိုးထိုး၊ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ဘဲထိုးထိုး ပြည်သူက ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေက လုပ် သွား ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့် တို့ လက်ထက်ကတည်းကတရုတ်နဲ့ တအားရောပြီး အထက်ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးမှာ ဗမာစကားကို တခွန်းမှမပြောတတ်တဲ့ ယူနန်ဘက်ကသူတွေကို မှတ်ပုံတင်တွေ ထုတ်ပေးတာတေလုပ်လာခဲ့တယ်။ လောလောဆယ် လူတွေသိနေကြတာက ဘင်္ဂလီတွေ၊ရိုဟင်ဂျာတွေကို နှင်ဖို့ လောက်ဘဲပြောနေကြပေမယ့် သူတို့ က ကျွန်တော်တို့ နိုင် ငံ အတွက် အဓိကအန္တရာယ်မဟုတ်ဘူး။ တကယ်က အထက်ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးအဓိက မန္တလေးမှာ တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေးတွေရှိတယ်။ သူတို့ က မြေတွေကိုလိုက်ဝယ် တယ်။ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပါ တော်တော်လေးဝင်ပြီး လွှမ်းမိုးတဲ့ သဘောမှာရှိတယ်။ စီးပွားရေးတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူး။ တကယ် တိုင်းပြည်မှာအန္တရာယ်ရှိတာက တရုတ်ပြည်ကြီး ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေက ကျွန်တော်တို့ အထက်ဗမာပြည်ကြီးကို မျိုလိုက်တာ။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ တတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ကြောက် စရာကောင်းတယ်။ မြေနိမ့်ရာလှံစိုက် တဲ့ပုံစံမျိုး ဘင်္ဂလီ ကိုရှင်းလိုက်၊ နိုင်ငံကနှင်ထုတ်လိုက်တို့ ဆိုတာတွေက တလွဲဆံပင်ကောင်းပြီးတော့ဖက်ဆစ်ဆန်ဆန်တွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုများနေတာ။
ဗမာအစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးယူချင်တာမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ။ ကချင်က သာမန်လူမျိုးစုလေးမဟုတ်ဘူး။ ကချင်က ကျွန်တော်တို့ ခေတ်သစ်နိုင်ငံကြီးကို၁၉၄၇ မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဦးနုတို့နဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ နိုင်ငံကိုအတူထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ ထောင်ခဲ့တာ။ သမိုင်းအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ ရှိရင်သမိုင်း ပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းကိုယ်တိုင်ပြော သွားတာ ရှိတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ မြေပြန့် က ဗမာတွေရဲ့ လက်အောက်မှာမရှိခဲ့ဘူး။ ကချင်တွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယုံကြည်လို့လေးစားလို့ လွတ်လပ်ရေး အတူတူတောင်း မယ်ဆိုပြီးတော့ တောင်းခဲ့တာ။ အဲဒီလိုလူမျိုးစု အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကို ဗမာစစ်တပ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက တမင်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးတော့ ကျုံးသွင်းတာ။ ပြီးတော့ ကချင်ထဲမှာ
အကျင့်စာရိတ္တ မခိုင်တဲ့၊ လောဘကြီးတဲ့သူတွေကိုမွေးထားပြီးတော့ ကချင်တွေကိုစီးပွားရေးအရ ကျုံးသွင်းဖို့ လုပ်တာ။ ဘော်ဒါဂတ်ဖို့ စ် ပေါ့နော်။ အဲဒါကို ဟိုဘက်လက်မခံလို့ဒီလိုဖြစ်တာ။ အားလုံးထဲမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကခွဲထွက်မယ့် ဘယ်လူမျိုးစုမှမရှိဘူး။ သူတို့(အစိုးရ)က တမင်အသာစီးယူပြီးတော့ သူတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ ရတဲ့ဟာမျိုးကို ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ သူတို့ က စစ်ကို ပေပြီးတော့ တိုက်တယ်။ ဗမာမဟုတ်တဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှမ်းပြည်နယ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကချင်ဘဲ
ဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး ရခိုင်ပြည်နယ်လိုနေရာမျိုးမှာ လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာတွေဟာ အဲဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာ ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ပျက်စီးတာက လွဲလို့ ရှိရင် သူတို့ အတွက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာဘာအကျိုးမှ မရှိဘူး။ ဒီကိစ္စက တိုင်းရင်းသားဒေသတွေတင်မကဘူး၊ကြေးစင်တောင် လက်ပံတောင်းတောင်ဘက်ကို ကြည့် လိုက်မယ်ဆိုရင်လယ်သမားတွေဟာ ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ကိုချီပြီး ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတေဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ လူအများစုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက အကျိုးမရှိတဲ့အပြင်
နော်ဝေက ဗမာပြည်ထဲကိုဝင်လာတာက ရှင်းရှင်းလေး။ နော်ေ၀၀င်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးပီပီပြင်ပြင်ရသွားတဲ့နိုင်ငံဆိုတာ မရှိဘူး။ ပါလက်စတိုင်းနဲ့ အစ္စရေးကိစ္စကိုကြည့်မယ် ဆိုရင် ၁၉၉၅ မှာ ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်ရာဆာအာရာဖတ်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်တို့အော်စလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုပြီးနော်ဝေကလုပ်တယ်။ စာချုပ်တချို့ချုပ်လိုက်တယ်။ ဒါပေ မယ့် ဒီကနေ့ အထိအစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်း ဂါဇာမှာ ချနေတုန်းဘဲ။ အော်စလို ၀င်လုပ်လိုက်လို့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။
အာရှတိုက်ကိုဝင်လာတဲ့အခါကျတော့လည်း နော်ေ၀၀င်လာလို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတယ်ဆိုတာ မတွေ့ ဖူးဘူး။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်၊ ကိုလံဘိုမြို့ မှာဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံထားတဲ့ ကိုလံဘိုအစိုးရနဲ့ခရစ်ယာန်အများစုဖြစ်တဲ့ကျားသူပုန်အဖွဲ့ နဲ့တိုက်ကြတဲ့ကိစ္စ။ နောက်ဆုံး ကျားသူပုန်တွေ လက်နက်ချပြီးတဲ့အခါမှာ အစိုးရတပ်က သတ်ပစ်တာ အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက်။ နော်ဝေ ကလည်းကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဘဲ။ အကျိုးအမြတ်ရချင်လို့ လာတာ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့သိဖို့ ရာ ကနိုင်ငံခြား က ၀င် လာတယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးသမားဘဲဝင်ဝင်၊ နိုင်ငံရေးသမားဘဲဝင်ဝင်ဘယ်သမ္မတဘဲလာလာ သူတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက်လာတာ။ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံကြီးလမ်းပွင်း သွားဖို့ တို့ ၊ ကျုပ် တို့ နိုင်ငံကလူတွေ ထမင်းနပ်မှန်အောင်စားဖို့ တို့ ၊ရှေ့ မှာစီးပွားရေးတွေကောင်းလာဖို့ အတွက်လာတာ မဟုတ်ဘူး။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမှာ တစ်နပ်မှအလကားရတဲ့ထမင်း၊ တစ်ခွက်မှအလကားသောက်ရတဲ့လက်ဘက်ရည်ဆိုတာ မရှိဘူး။
မေလထဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသမီး ဗလက္ကာရ အပြုခံရပြီးအသတ်ခံရတယ်။နောက် ဗမာသတင်းစာတွေထဲမှာ ပါတာကလည်း ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးတစ်ယောက်ကို မွတ်စလင်သုံးယောက်က ဗလက္ကာရကျင့်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့သတင်း ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းထွက်လာပြီးတဲ့အခါတောင်ကုတ်ဘက်မှာ မွတ်စလင် ဆယ်ယောက်လောက်ကို လူ ၃၀၀ လောက်က၀ိုင်းသတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်၊ အစိုးရဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်အစိုးရနဲ့ မကင်းတဲ့ အဖွဲ့ ရဲ့ လက်ချက်ပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။
ရခိုင်တွေနဲ့ မွတ်စလင်တွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရှိတယ်။ ကျောက်နီမော်လိုနေရာမျိုးကိုကြည့်လိုက်၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နေလာတာ။ ဘာမှပြဿနာ မရှိဘူး။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေဘင်ဂလီဘဲခေါ်ခေါ်၊ ရိုဟင်ဂျာဘဲခေါ်ခေါ် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရိုက်နေကြတာ ခုတ်နေကြတာ မရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒီလိုအနေ အထားမျိုးမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်လာကြအောင် ဘယ်သူကနှပ်ကြောင်းပေးလိတာလဲ။ အဲဒီနှပ်ကြောင်းပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာ အစိုးရက ဘယ်အတိုင်း အတာ ထိပါ သ လဲ။ နောက်တစ်ခုက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတာ အနောက်ကဖိအားတွေ ၀င်မလာအောင်လုပ်တာဖြစ်မယ်။ ဒီလူမျိုးရေးပြဿနာကအစိုးရဘက်က တစ်နည်းတစ်ဖုံ နဲ့ နိုင် ငံရေး ကိုကစားတာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ ရှိရင် လူမျိုးရေးအရေးအခင်း စဖြစ်ကတည်းကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စကားတွေက လေး၊ငါးခါလောက် အမျိုးမျိုး စကားလမ်းကြောင်းတွေပြောင်း သွား တယ်။ သမ္မတလို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတောင် မျိုးစုံပေါ့ဗျာ။ ဒီကွေ့ မှာဒီတက်နဲ့ လှော် ပုံစံမျိုးနဲ့ ။ အဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ နေပြည်တော်က မရိုးမသားနဲ့ ဝင်ပြီးတော့ပါတယ် လို့ ကျွန်တော်ထင် တယ်။ နေပြည်တော်ကလူတွေကို လုံအယုံအကြည်မရှိဘူး။ ဒီလူတွေက အာဏာရရေးအတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် “တည်”ပေးတာ၊ “တို့ ”ပေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
အောက်ခြေကလူတွေ မတည့်မှ ယာလည်းညက်စေ ကြက်လည်းပန်းစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ကြက်ကိုလည်းဖမ်းမယ်၊ ယာကိုလည်းထွန်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလို့ ကျွန်တော်မြင် တယ်။ ကြီးတဲ့အမှုကိုငယ်အောင် ငယ်တဲ့အမှုကိုပပျောက်အောင် လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ငယ်နေတဲ့အမှုကိုကြီးအောင်၊ ကြီးတဲ့အမှုကိုတစ်နိုင်ငံလုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်အောင်လုပ်တဲ့ အစိုးရ မျိုး ဆိုလို့ ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သင့်သင့်မြတ်မြတ် နေလို့ ရမလဲ။ အုပ်ချုပ်သူတွေကတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမြင်ကွဲပြားတာကို အမြတ်ယူပြီးတော့နိုင် ငံ ရေးသွေး စပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဆယ်နှစ် တစ်ခါ၊ ၁၅ နှစ် တစ်ခါ၊နှစ် ၂၀ တစ်ခါဆိုသလိုဘဲ တိုင်းပြည်မှာ စစ်ဘေးရော၊ ဘာသာရေးမီးရောဘယ်တော့မှ ငြိမ်းမှာ မဟုတ် ဘူး။
(ယူနတီ ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁၅ တွင် ဖော်ပြပါရှိသော “မြန်မာ့အရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူ ဒေါက်တာဇာနည်နှင့် အင်တာဗျူးမှ ထုတ်နုတ်ကူးယူပါသည်။ အင်တာဗျူး မူရင်း ကို မော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူသည်ဟု ယူနတီ ဂျာနယ်က)
ရေးသားထားပါသည်) Maung Zarni shared Aungmyo Tun‘s photo.
Posted in: မှတ်စု, အထူး, Report
ဇီးကုန်းမြို့နယ် ဖျက်ဆီးခံရမှု့ မှတ်တမ်းနှင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု စာရင်းအချို့
ဇီးကုန်းသား တစ်ဦးရဲ့ ရင်တွင်းသံ
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး အနောက်ပိုင်း ဇီးကုန်းမြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးသူများ၏ ၂၇.၃.၂၀၁၃ (တပ်မတော်နေ့) နံနက် ၂း၀၀ နာရီမှ ၅း၀၀ နာရီထိ တစ်ကြိမ်၊ နေ့လယ် ၂း၀၀နာရီမှ ညနေ ၄း၁၅ နာရီထိ တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း နှစ်ကြိမ် ဖျက်ဆီးခံရမှုတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ဗလီကြီးနှင့် ဗလီကြီးရှိ အတွင်းပစ္စည်းများအားလုံး၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် သာရေးနာရေးပစ္စည်းများ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ သုသာန်ရှိဇရပ်နှင့် လမ်းများ ကာလတန်ဖိုး ခန့်မှန်းခြေ သိန်းပေါင်း ၃၀၀ နီးပါးခန့်နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ နေအိမ်၊ ဆိုင်ခန်း(၄၀)ကျော် ကာလတန်ဖိုး သိန်း ၇၀၀ နီးပါးခန့် ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ထိုသို့ ဖျက်ဆီးခြင်းမခံရမီနှင့် ဖျက်ဆီးခံရပြီး အချက်အလက်များကို လေ့လာကြည့်သောအခါ-
မဖြစ်မီ တစ်ပတ်ခန့်ကပင် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ရပ်များ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို မြို့တိုင်းလိုလို ကြားသိနေရသဖြင့် စိတ်ပူပန်မှု၊ စိုးရိမ်မှုများ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပြီး (၂၃)ရက်နေ့တွင် အိုးသည်ကုန်း နှင့် ရေကျော်ရွာအနီးတွင် စတင်ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ မဖြစ်မီ သုံးရက်အလိုခန့်တွင် ဇီးကုန်းမြို့ပေါ်တွင် (၉၆၉) တံဆိပ်ပါသော စတေကာများကို ဆိုင်ကယ်များ၊ ဆိုင်များတွင် လိုက်လံကပ်ပေးပြီး နောက်ကွယ်တွင် ဘာသာရေး တိုက်ခိုက်မှု တိပ်ခွေများ၊ စာရွက်များပါ ဝေငှနေကြောင်း ကြားသိလာရသောအခါ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ စိုးရိမ်စိတ် များ ပို၍ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းရှိ မြို့တိုင်းလိုလို၌ ဖြစ်ပေါ်နေရာ သက်ဆိုင်ရာမှ သိရှိနေသော်လည်း ခေါ်ယူမေးမြန်း စစ်ဆေးခြင်းများ လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။
ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်(၃)ဦးအား ခေါ်ယူ၍ မြို့ပေါ် (၅)ရပ်ကွက်မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊သာသနာရေးဦးစီးမှူးတို့ ရှေ့မှောက်တွင် ယခုအခါ ကောလာဟလ အမျိုးမျိုး ထွက်ရှိ နေကြောင်း၊ မိမိတို့ဘက်မှလည်း ကောလာဟလသတင်းများကို အခြေပြု၍ ပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ်စေ ရန် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက် နေကြောင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှလည်း မိမိတို့ဘာသာဝင်များအား သွားလာခြင်း၊ နေထိုင်ပြောဆိုမှုများ ဆင်ခြင်ရန် အတွက် ဂေါပကအဖွဲ့များမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားခဲ့သည်။ မဖြစ်မီ ၁ ရက်အလို တွင် တရားပွဲလိုက်လံ ဖိတ်ကြားနေသော ထော်လာဂျီသည် တရားပွဲဖိတ်ကြားရာတွင် ဒါတို့တိုင်းတို့ပြည် သီချင်းကို လော်စပီကာဖြင့် ဖွင့်ကာ လိုက်လံကြေညာနေပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှလည်း နေ့စဉ်လိုလို နံနက် ည ဗလီရှေ့တွင် ရောက်လာပြီး အခြေ အနေများကို ဂေါပကအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းဝင်းထံ မေးမြန်းသည်။ ယခုအခါ ကောလာဟလမျိုးစုံ ထွက်နေ ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဘက်မှလည်း လုံခြုံရေးများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ မီးသတ်ကား ရေပိုက်ဖြင့် ထိုးလိုက်ပါက ဘယ်လောက် များသည့်လူပင်ဖြစ်ပါစေ ထွက်ပြေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ၂၅.၄.၂၀၁၃ နေ့ ညနေတွင် ဈေးသူဈေးသားများသည် မိမိတို့ရောင်းဝယ်နေသော ပစ္စည်းများကို ဆိုက်ကား၊ ထော်လာဂျီများဖြင့် အိမ်များ သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်နေသည်ကို ရုတ်ရုတ်သဲသဲတွေ့ရှိနေရပြီး ဘာကြောင့်မှန်း မသိရချေ။ ညနေ ၅း၀၀ နာရီခန့်တွင် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်မင်းမှ ဗလီသို့လာရောက်၍ ဂေါပကအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းဝင်း(M.G.T)အား မိမိရုံးသို့ ခေတ္တလာရောက်ပါရန်ခေါ်သဖြင့် ၀တ်ပြုပြီးလိုက်သွားချိန်တွင် လမ်းထိပ်၌ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ လှမ်းခေါ်သဖြင့် သွားရောက်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ‘ဘာထူးသေးလဲ၊ ခင်ဗျားဆီကို ဗလီမီးရှို့ မယ်လို့ ဖုန်းတွေ ဘာတွေ တစ်နေရာရာက ဆက်သေးလား’ဟု မေးသည်။ မိမိကလည်း မည်သူမျှမဆက်ကြောင်း ပြန်ပြောသည်။ ထိုအခါ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ယခုအခါ ကောလာဟလ မျိုးစုံထွက်နေကြောင်း ဒါတွေကို မယုံရန်ပြောဆိုပြီး မိမိတို့ဘက်မှလည်း အထူးလုံခြုံရေးများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထူးခြားချက်ရှိလျှင် သတင်းပေးပို့ရန် ပြောဆို သွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မိမိသည် (၄)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်သို့ သွားရောက်ပြီး မိမိအား မည်သည့်ကိစ္စနှင့် ခေါ်သည် ကို မေးမြန်းရာ ၎င်းမှ ]ဈေးထဲတွင် ခင်ဗျား အရမ်းနာမည်ကြီးနေတယ်၊ အဲဒါအတွက် ခေါ်ဆွေးနွေးတာပါ’ ဟုပြောသည်။ ဦးသန်းဝင်း မှ ‘ကျွန်တော် အခု ဈေးကပင် ထွက်လာကြောင်း၊ ဘာအတွက်နာမည်ကြီးတာလဲ၊ မိမိပင် မသိရှိကြောင်း’ မေးရာ ၎င်းမှ ‘MGT မှ ဗလီမီးရှို့လျှင် ဈေးကိုပြန်မီးရှို့မယ်လို့ ပြောတဲ့သတင်းတွေ ထွက်နေလို့ ခေါ်မေးတာပါ’ လို့ ပြောပါသည်။ ထိုအခါ မိမိက ‘ခင်ဗျားကို ဘယ်သူပြောလဲ၊ ပြောတဲ့လူ ဖော်ထုတ်ပေးပါ’ ဟု ပြောသောအခါ ၎င်းမှ ‘ခင်ဗျား မပြောမှန်း သိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာ တမင်ဝါဒဖြန့်တာတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကလူတွေ ပြဿနာ မရှိဘူး၊ ထိန်းလို့ရတယ်၊ လိမ္မော်သီးတွေပါလာရင် ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားကို ခေါ်တွေ့နေရတာပါ’ လို့ ၎င်းဘေးတွင်ရှိနေသူ သောင်းတင်(ရုံးအကူ တရားရေး)မှ ပြောဆိုသောအခါ မိမိသည် အိမ်ပြန်လာပြီး ၎င်းအခြေအနေ များကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စခန်းမှူး၊ စ.အ.ဖ များသို့ ဖုန်းဖြင့် ပြောပြခဲ့ပြီး ၎င်းကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးပါရန် တောင်းဆို ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဈေးတွင် ဖြစ်ရပ်ကို စုံစမ်းကြည့်ရာ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် စည်ပင်ဦးစီးမှ တစ်ဆိုင်တစ်ယောက် ရုံးတွင် ခေါ်ယူပြီး ‘၂ ရက်ဈေးပိတ်မယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ပစ္စည်းတွေ လုံခြုံအောင်ထားကြ’ လို့ ပြောလိုက်သည်ကို ဈေးသူဈေးသားများ က မိမိတို့ပစ္စည်းများကို ရွှေ့နေကြခြင်းသာဖြစ်ပြီး ၎င်းကိစ္စကို အခွင့်ကောင်းယူကာ တစ်ဖက်အုပ်စုမှ ဗလီကိုမီးရှို့လျှင် M.G.T မှ ဈေးမီးရှို့မယ်ဆိုလို့ ရွှေ့နေကြတာဖြစ်မယ်လို့ ၀ါဒဖြန့်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုး အခြား မြို့နယ်များတွင်လည်း ဘာသာရေး နှင့်ဗလီတွင် ထက်မြက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို အကြောင်းတစ်ခုပြ၍ ကောလ ဟာလ ၀ါဒဖြန့်ချိနေကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။
ထိုနေ့ ညနေ ၆း၃၀ နာရီအချိန် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၀င်များ၊ မြို့မိမြို့ဖဆိုသူများ ဗလီရှေ့ ဈေးထောင့်တွင် လုံခြုံရေးထားရှိမည့်အကြောင်း အတွင်းရေးမှူးအား ပြောဆိုသည့် အတွက် ဗလီရှိ ခုံများ၊ စားပွဲများကို နေရာချထားပေးခဲ့ပါသည်။ မဖျက်ဆီးမီ အလျင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် အထူးလုံခြုံရေး အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့နေရာချထားပေးပြီး ဦးသန်းဝင်း အတွင်းရေးမှူးမှ အိမ်ပြန်ထမင်းစားရင်း မိမိ မိသားစုမှ ထိုကဲ့သို့ တစ်ဖက် သတ်မဟုတ်မမှန် ကောလဟလ ၀ါဒဖြန့်မှုများကို စိတ်မချရသည့်အတွက် ၎င်း၏တူမ စာသင်ရာနေရာလည်း ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ မယင်ကျေးရွာ ဦးတင်အေးမိသားစုထံတွင် ၎င်းတို့ ညီအစ်ကို ၂ ဦး တူ ၁ ဦးတို့ ရွာသို့ သွားရောက် နေထိုင်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုနေ့ညတွင် ကြို့ပင်ကောက်မြို့တွင် အကြမ်းဖက်သူများက ညပိုင်းတစ်ကြိမ်၊ နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ကြိမ် ဗလီနှင့် စာသင်ကျောင်းအပါအ၀င် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနေအိမ်၊ ဆိုင်ခန်းများကိုလည်း အဓမ္မ ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဗလီကြီးကိုပင် ဂေါ်ကားဖြင့် ထိုးလှဲဖျက်ဆီးကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ၂၆-၄-၂၀၁၃ ညပိုင်းတွင် နတ္တလင်း မြို့ရှိ ဗလီစာသင်ကျောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ နေအိမ်၊ ဆိုင်ခန်းများကိုလည်း အကြမ်းဖက်သူများက ဖျက်ဆီးခဲ့ ကြောင်း ထပ်မံသိရှိရပါတယ်။
၂၇-၃-၂၀၁၃ နံနက် ၂း၀၀ နာရီခန့်တွင် အကြမ်းဖက်သူအုပ်စုများသည် ဇီးကုန်းမြို့ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ၏ ဗလီနှင့် စာသင်ကျောင်း၊ အိမ်များ၊ ဆိုင်ခန်းများကို အင်အား ၃၀၀ ကျော်နှင့် ဖျက်ဆီးနေကြပါသည်။ ဖျက်ဆီးမှုတွင် မြို့ခံလူ ၉၀% ကျော်ပါဝင်နေသည်ကိုလည်း သိရှိရပါသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် ဈေးကို နံနက်ပိုင်း ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပိတ်လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် လူများသည် ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု စုဝေးလာပါသည်။ မြို့ပေါ်တွင် နံနက်ပိုင်းတစ်ချိန်လည်း လမ်းများပေါ်တွင် ပြည့်နှက်နေပြီး၊ ၎င်းကိစ္စရပ်ကို မည်သူကမျှ တားဆီးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ တဖြည်းဖြည်း လူများလာပြီး နေ့လယ် ၂း၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ဗလီနှင့် ရှေ့ရှိ ဆိုင်ခန်း များ အိမ်များကို ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံဖျက်ဆီးကြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဈေးအပြင်ဘက်တန်းရှိ ဆေးဆိုင်၊ ဆံပင်ညှပ် ဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင်တို့မပိတ်ဘဲ ဖွင့် ထားပြီး ထိုနေရာများတွင်လည်း လူများအပြည့်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဗလီကို ဖျက်ဆီးရာတွင် ခေါင်ပေါ်အထိတက်ပြီး ဧရာမတိုင်ကြီးများကို ဖျက်ဆီးနေသည်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မှန်းသိသော်လည်း ဒီနေ့ထက်ထိ မည်သူမျှ မပြောရဲကြပါ။
စစ်တပ်ဘက်မှ သေနတ်အပေါ်ထောင်ဖောက်လိုက်ပြီး လူစုခွဲသော်လည်း ဖျက်ဆီးနေသူများမှ ခေါင်းဆောင် လုပ်သူက မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တာ ပြေးစရာမလိုဘူးဟုဆိုပါသည်။ တစ်နေရာဖျက်ဆီးရန် အချိန်ပြည့်ပြီး နောက်တစ်နေရာ သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖျက်ဆီးရန် အချက်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အားလုံးပျက်စီးသွားပြီး ဘာမှ ရစရာမရှိတော့ သောအခါမှ ညနေ ၄း၁၅ နာရီလောက်တွင် သေနတ်ဖြင့် လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီး ပွဲသိမ်းလိုက်ပါတော့သည်။
ဤသည်ကို သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးတွင် နယ်မြေဒေသခံ ၉၀% ကျော် ပါဝင်ပါသည်။ လက်လုပ် လက်စားသမားမှ ငွေကြေးချမ်းသာသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့် မြို့မိမြို့ဖများအထိ ပါဝင်ပါသည်။ ဘာသာရေးအရ ရော၊ စီးပွားရေးအရပါ ချွတ်ခြုံကျစေလိုသည့် သဘောဆန္ဒများတွေ့နေရပါသည်။ ရေသန့်ဘူးဝေသူများ၊ အချိုရည်ဘူး ဝေသူများ၊ အရက်နှင့် စိတ်ကြွဆေးများ ထည့်သွင်းပြီး ဝေငှနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မိသားစုများသည် မိမိတို့ အသက်အန္တရာယ်ဘေးကင်းရာ မိမိတို့ရင်းနှီးရာ ရွာများသို့ တိမ်းရှောင်နေစဉ် ထိုသတင်းကို အကြမ်းဖက်သူများ သိသောအခါ ထိုရွာများသို့ လိုက်လာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် ရွာခံများမှ ညတွင်းချင်း လယ်ကွင်းများထဲသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါသည်။ ထိုသတင်းကို မယင်းရွာမှ ဦးတင်အေးမိသားစုမှ ကြားသိသောအခါ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ထိုသူအားလုံး တိမ်းရှောင်နေသော နေရာများသို့ ကားများဖြင့် လိုက်လံခေါ်ယူပြီး ၎င်း၏နေအိမ်တွင် လုံခြုံစွာ ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုမှစ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၂၆၀ ကျော်အား ဦးတင်အေး မိသားစုမှ မည်သူ့ထံကမှ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာမယူဘဲ မိမိကျွေးမွေး စရိတ်အားလုံး အကုန်အကျခံကာ ခုနစ်ရက်တိတိ မိမိရွာသားများဖြင့် လုံခြုံစွာ ဆယ်ဧကကျယ်ဝန်းသော မိမိ၏ခြံကြီးထဲ ရှိ အိမ်ကြီးများတွင် လွတ်လပ်စွာ ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက် ကယ်တင်ထားခဲ့ပါသည်။
ထိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိသားစုကြီး၏ ကျေးဇူးတရားမှာ ဆယ်ကမ္ဘာမက ဆပ်၍မကုန်သော ကျေးဇူးများဖြင့် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ပုဒ်မ-၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် လယ်မ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲခြံကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းပြဆရာမ အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလေးများအား စာသင်ကြားပေးနေသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဆရာမမိသားစု ၃-စု၏ ပစ္စည်းများကို မိမိနှင့်ရင်းနှီးသူ လက်သမားဆရာကြီးတစ်ဦး၏အိမ်တွင် မဖြစ်မီ ငါးရက်ခန့်က ထော်လာဂျီများဖြင့် ပို့ဆောင်ထားသော ပစ္စည်းများကို ကျွဲခြံကျေးရွာ အလှူမှတစ်ဆင့် အကြမ်းဖက်သူများသည် လယ်ကွင်းထဲသို့ထုတ်၍ ရက်စက်စွာ ဖျက်ဆီး ပစ်သည်မှာ အင်မတန်ဆိုးဝါးလှသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆရာမလေး၏ ကျောင်းတက်ရာတွင် ၀တ်ဆင် ရသည့် ယူနီဖောင်း အဖြူနှင့်အစိမ်းမှအစ အ၀တ် အစားအားလုံး ဖျက်ဆီးပစ်သည်မှာ အင်မတန်ဆိုးဝါးသော လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်သမားများမှာ မည်သူများဟု သိနေ သော်လည်း ယခုထက်ထိ ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသေးပါ။
၃၁.၃.၂၀၁၃ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပိုင် ကားများ၊ ဇီးကုန်းမြို့ နာရေးကူညီမှု အသင်းမှ ကားများဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏နေအိမ်များသို့ အရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြကြောင်းကိုလည်း သိရှိရ ပါတယ်။
Posted in: မှတ်စု, သတင်း, အထူး, Report
ဘာသာရေးမုန်းတီးသူများကမွတ်ဆလင်တို့ အားသေ ကြေပျက်စီး ဆုံးရှုံး အောင်ပြု လုပ်ခြင်း၊ An Overview of Myanmar’s unfolding pogroms: Anti-Muslim Violence and Destruction
This is notacommunal conflict – this is an attack against Muslim people, Myanmar’s pogroms.
With no exception, the violence was overwhelmingly committed by the well-organized “Buddhist” mobs against Muslim families and communities, including children and babies. According to the UN, since the anti-Muslim violence erupted on 20 March the resultant displaced victims are estimated to be about 12,000, and the majority of them are Burmese Muslims.
The attackers often use the slogan and logo of 969 which isacorruption of Buddhist teachings, incompatible with the Buddhist message of universal loving kindness.
Dr. Maung Zarni of the London School of Economics, describes the 969 group as
Burmese men in monks’ robes, who have been using Hitlerian tactics of e-mongering as they spread Islamophobia – they are Buddhist neo-Nazis.
The attacks started in Meiktila, which hadalong-standing and thriving Muslim community, and spread to other towns in Mandalay Division and Western Pegu Division. Thirteen towns were attacked and mosques and Muslim property were destroyed; 13,000 people were forced to flee from Meiktila alone.
We estimate that 70 to 100 Muslim were killed during these anti-Muslim attacks. According to informationcollected on the ground, the state authorities and security forces present neither took adequate action nor provided leadership to try to stop the violence. According to eye witnesses, the attackers launched their assaults in full view of the police. The attackers were not local – they were brought in from outside and functioned as well organized mobs. There are multiple reports that in some areas, the attackers drove bulldozers during the assaults, which they used to maximize the destruction of houses and mosques.
The Wall Street Journal, 26 March 2013, expressed the following concerns:
As many as 10% of the 60 million people living in Myanmar are Muslim,arelatively small number. Analysts such as Maung Zarni,avisiting fellow at the London School of Economics, worry that Buddhist nationalist extremists are using old animosities to gain leverage in the new Myanmar that is emerging after the army ceded power toanominally civilian administration in 2011—and that this could badly destabilizeageographically significant country courted by both China and the U.S
On March 28, President Thein Sein appeared on television inanational address regarding the violence in Meiktila. He said that “political opportunists and religious extremists” were behind the riots. He affirmed his “…commitment to individual freedoms, civil liberties for all and democracy” and emphasized “finding common ground to coexist peacefully while upholding our democratic ideals.” He claimed that, “All perpetrators of violence will be prosecuted to the full extent of the law.”
The President madeasimilar claim regarding the Rakhine violence last year. Yet the perpetrators of the violence against Muslims in Rakhine State have not been brought to justice. Peace has not get been restored and impunity to cause numerous forms of harm to Burmese Muslims across the country continues.
Asamatter of fact, the quasi-civilian government and security forces have decades of experience and significant expertise in information gathering and highly skilled intelligence staff.
A most deeply disturbing aspect of the pogroms is the reported involvement of the State’s institutions, especially the law enforcement agencies including local civil administrations, security forces and the military.
Quoting the United Nations Special Rapporteur on Burma human rights Tomas Ojea Quintana, the Oslo-based Democratic Voice of Burma and wire news agencies s such reported thus:
Similarly, ina29-March-dated essay entitled Kristallnacht in Myanmar, the New York Times unearthed the fact that the violence against the Muslims in Meikhtila took place, un-obstructed, in the presence of Myanmar security troops. The Times reporter wrote:
This raises some serious questions about Thein Sein government’s commitment to protect vulnerable religious minorities, most specifically the Muslims.
1. Why, nine months on from the violence in Rakhine State, have Buddhist extremist groups that preach and perpetrate violence against Muslims, including those responsible for the attacks in Rakhine State and members of 969, not been identified?
2. Why have their members not been arrested?
3. Why have they been allowed to continue with their campaign to disseminate verifiably malicious mis-information about the Burmese Muslims among the Buddhist majority?
Many other questions also remain unanswered, such as, how did the attackers gain access to bulldozers?
Who owns them? Who trained the attackers to drive them? In Myanmar, it is not easy for regular civilians to secure use of such equipment.
Why are power and phone lines – both under the government’s direct control – typically cut off in the targeted Muslim neighborhoods before the violent attacks?
This is not communal or sectarian conflict between Buddhist majority and Muslim minorities: it is series of one-sided, targeted violent and often lethal attacks against, their properties and businesses, which occur under the purview of sta te authorities – in other words, the Myanmar pogroms.
It is not only concerns over the prevailing climate of impunity that exist regarding the anti-Muslim attacks, but we also have legitimate concerns regarding support for victims and respect for the rights of Muslims to return to their homes and rebuild their properties and lives. As the recent Human Rights Watch report emphasized, there is reportedlyaMyanmar government policy regarding humanitarian aid to Muslims in Rakhine State as well as their long-term segregation:
(Press Release) Human Rights Watch: Rohingya Muslims Face Humanitarian Crisis
Burmese government restrictions on aid to Rohingya Muslims are creatingahumanitarian crisis that will becomeadisaster when the rainy season arrives,” said Phil Robertson, deputy Asia director at Human Rights Watch. “Instead of addressing the problem, Burma’s leaders seem intent on keeping the Rohingya segregated in camps rather than planning for them to return to their homes.
It is vital that immediate action is taken to assist the victims of the anti-Muslim attacks that have occurred since March 20th throughout Myanmar. Thousands of people are now in serious need of immediate humanitarian assistance including shelter, medicine, clean water, food and protection from violent uprisings. Until now, there has been inadequate intervention by the either the military or the government to protect vulnerable communities and victims. There are wide-spread reports of inadequate policing and inadequate assistance to the victims.
The national government is not supplying adequate protection, and the assistance of international agencies is critical to save lives. These attacks followaprecedent of anti-Muslim incidents in Myanmar, and areaclear violation of human rights.
§ In the city of Meiktila, Mandalay Division, anti-Muslim attacks and riots led to the destruction of hundreds of buildings and homes, vehicles and motorcycles, and Mosques. People were brutally beaten, attacked with machetes and burnt in the streets. It is estimated that 50 people were left dead after this incident. The murders include 28 children and4teachers taken from an Islamic School on March 21st. The security forces in the area did not protect the school, despite requests from Muslim organizations. There are now about 13,000 refugees in the area, many are seeking refuge in camps in Meiktila. Refugees are left without communication lines and are running out of food and water.
§ Reports of violence from many towns including Yamethin and Lewei close to the capital Naypidaw. Also, there have been attacks in3townships in the Bago region.
§ Anti-Muslim attacks reported in Pyay, Myanmar. Distribution of anti-Muslim propaganda including leaflets, anti-Muslim preaching in surrounding villages whichawitness reports were played on loudspeakers distributed byamilitary truck. Muslims in this area were also threatened and told not to resist the destruction of their mosques or they would be in danger.
§ Ywe Su village in Tat Kon, Nay Payi Taw was attacked. There wasaMosque and 20 Muslim houses in this village.
§ In Kyopinkauk near Pegu, Muslim houses, shops,aMosque andareligious school were attacked. There were approximately 400 Muslims in this town and 150 Muslim houses.
§ In Oak Kan, north of Yangon, “969” Buddhist monks were preaching anti-Muslim messages daily; the citizens fear attacks as there have been threats to Muslims in the area. Some attackers have threatened to burn the Panipin village which isaMuslim area.
§ In Minhla, Pegu Division3mosques were destroyed as well as Muslim owned houses,acafé andabicycle shop. About 500 rioters came with weapons from Gone Su, Zigone Myo Thit. A mob raided Sit Kwin and destroyed properties. There were3mosques and about 100 Muslim houses in Minhla.
§ In Zigon, Pegu Division, about 500 rioters destroyedaMosque and many houses.
§ In Patigone, Pegu Division, attackers destroyed Muslim houses.
§ MoeNyo, Pegu Division. A Mosque was attacked.
§ An arson attack on the mosque on the 48th Street in Rangoon that resulted in the death of 13 Madrasa students. Government quick to announce the fire was the result of poor electrical wiring in the mosque while eyewitnesses saw people lobbing petrol-bombs into the building.
Posted in: သတင်း, ဆောင်းပါး, Report